Mormiin barattootaa ammas akkuma itti fufetti jedhama - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Mormiin barattootaa ammas akkuma itti fufetti jedhama
Torbaan darbe mormiin barattoota magaalaa Gincii manniin barnoota addaddaatti kan eegale gara manniin barnootaa fi magaalota biraattis darbuu VOA’n gabaase. Akka gabaasa kanaatti barattoonnii fi jiraattoonni hiriira irraa qooda fudhatan hidhamu, reebamu. Naannoon hiriirri ciccimaan itti geggeeffame Gincii fi Mandii ta’uunis beekameera.
Akka maddeen odeeffannootti mana barnootaa irraa lafti hangi tokkoo fi istaadiyoomiin Gincii angawootaaf kennamuu isaati barattoota Gincii, manniin barnoota sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa, dallansiisee mormiidhaaf daandii irratti kan baase. Bosonni Cillimoo gurguramuufi ciramuunis dhimma jiraattota naannoo sanii aarseedha.
Tajjabaan tokko, hookkara ka’een barattoonni konkolaataa Salaam irratti halleellaa dhaqqabsiisaniin foddaan konkolaatichaa caccabuu VOA’tti himaniiru. Qaama imaltootaa irra balaan gaye tokko akka hinjirre ragaa bayaniiru. Barattootaafi jiraattota kan mudate: reebamuufi hidhamuudha.
Magaalaa Mandiitti barattootaa fi jiraattotaan hiriirri mormii master pilaanii Finfinnee cimaan taasifameera. Ummanni Manditti hiriira baye dhaadannoo, ‘Buraayyuun kan Oromooti! Sabbataan kan Oromooti! Galaan kan Oromooti!’ jedhu dhageessisaa turan jedhameera.
Hiriira bittinsuudhaaf tankaarfii humni nageenya ‘federaalaa’ fudhateen namoonni heddu reebamuu isaati jiraataan magaalaa Mandii kan VOA’tti hime.
Hanga ammaatti namoonni 70 oli, irra jiressatti barattoota, mana hidhaatti guuramuu isaaniiti kan madda addaddaa irraa dhagayamu. Mootummaan kan ni haala.
Komishiinii Poolisii Oromiyaa irraa, Obboo Salamoon Taaddasaa, hiriirri magaalota garagaraatti geggeeffamuu amananii, tankaarfiin fudhatame tasgabbii uumuudhaaf yaadameeti jedhu. Barattoonni qabeenya ummataa irra balaa geessaniiru jechuun dubbatu. Barattoonni hidhaman 14 qofa ta’uufi seerattis kan dhiyaatan ta’uu VOA’tti himaniiru. Namoonni hiriira barattootaa boodaan jiru amantaa jedhu kan qaban ta’uufii hordofaniis kan seeratti dhiyeessan ta’uu dubbatan, Ob.Salamoon Taaddasaa.
Previous articleMaalii magaalaa Bamakootti hidhattoonni namoota 170 iggituun gabaafame
Next articleGanzabee Dibaabaa IAAF World Athlete of the Year jedhamte